China lafiny gusset Manufacturers kitapo sy ny Suppliers | DingQi
Side gusset kitapo ireo laza ho an'ny fampiharana maro isan-karazany manerana ny orinasa. Ny mateza dia manampy ara-nofo ny fiainana talantalana manitatra amin'ny fiantohana ny vokatra soa aman-tsara mbola voaisy tombo-kase sy voaro.
Ny lafiny gusset kitapo no be mpampiasa indrindra noho ny famonosana ampiasaina tsakitsaky sy maina sakafo toy ny voanjo, mofomamy, kafe tsaramaso sy ny maro hafa. Fa ireo kosa dia ho lehibe ihany koa pouches fonosana vahaolana ho an'ny sakafo sy ny hatsaran-tarehy mangatsiaka vokatra. Ny lafin-javatra javatra iray sy ny fanao amin 'ny lafiny misy kitapo gusset manome safidy manokana kokoa ny hanohana ny fanta-daza alohan' napetraky ny marika.
Ny koa ny fomba iray degassing miditra tsimoramora, gusseted lafiny kitapo dia tonga lafatra ho an'ny kafe packaging.Because natsatsika tsaramaso mamokatra kafe be dia be ny gazy karbonika. Ny asa-manidina miditra tsimoramora ao amin'ny kafe kitapo dia ny manefa ny entona niteraka ny kafe tsaramaso avy ao an-kitapo, dia toy izany no antoka ny hatsaran'ny ny kafe tsaramaso sy fanesorana ny mety ny kafe Hipoaka kitapo. Ankoatra izany, ny setroka miditra tsimoramora ihany koa dia afaka manakana ny oksizenina any ivelany ho ao an-kitapo sy mampanakaiky ny kafe tsaramaso mba oxidize fahasimban'ny!
Side gusseted kitapo kafe dia misy amin'ny malalaka fifantenana ny habeny sy ny loko sy ny matte anisan'izany gloss vita. Koa izy ireo avy amin'ny andian-tsoratra ambany na QUAD fanorenana tombo-kase izay manome fanampiny mateza sy afaka fonony mavesatra entana. Ny lafiny gusseted kitapo kafe no safidy tsara ho an'ireo izay te-hanao fanambarana momba ny vokatra.
Ny kitapo natao ny ara-nofo sy ny laminated zavatra lalina indrindra dia PE amin'ny fiarovana. Ny zavatra afaka hikasika dia: Kraft taratasy, taratasy fotsy, PET / PE, foils.We manana FDA, SGS sy ny fanamarinana. Ny kalitao ny vokatra azo itokisana tanteraka.
Ny orinasa mampiasa gravure fanontam-pirinty. Amin'izao fotoana izao, ny hatsaran'ny gravure fanontam-pirinty no tsara indrindra amin'ny fanontam-pirinty isan-karazany methods.Printing tsara dia miovaova, fanompoana ela velona, ​​mety ho an'ny fanontam-pirinty faobe.
Clear Mijoroa Up Pouches , Mijoroa paosy Bags , Kraft Paper Resealable Bags , Mijoroa Up paosy fonosana plastika , Mijoroa paosy fonosana , Clear Plastic Mijoroa Up Pouches ,